Android မွမ်းမံမှုများစစ်ဆေးရန်ခလုတ်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ Androidsis
အ Updates for ခလုတ်ကို သုံး၍ update တစ်ခုရရှိနိုင်လားဆိုတာ Android ဖုန်းတွေမှာလွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခလုပ်ကိုနှိပ်သောအခါရရှိနိုင်၊ မရတစ်ခုခုရှိမရှိကြည့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းသည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားပုံရသည်ဖြစ်သော်လည်း၊ စနစ်အတွက်တစ် ဦး ပျက်ကွက်ရှိသေး၏.
Elliott Hughes သည်ဂူဂဲလ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး updates ခလုတ်မအောင်မြင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် လက်ရှိအလုပ်မလုပ်ပါဘူး လွန်ခဲ့သောလပေါင်းများစွာကဖြစ်ပွားခဲ့သောအလားတူအခြေအနေမျိုး။ ဒါ့အပြင်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုရဖို့စောင့်နေရ ဦး မှာပဲ။
En စက်တင်ဘာလစက်တင်ဘာလတွင် update ခလုတ်တွင်အမှားတစ်ခုတွေ့ရသည်ကံကောင်းတာကဖြေရှင်းခဲ့သည်သော။ သို့သော်သုံးလအကြာတွင်အလားတူအခြေအနေမျိုးထပ်ဖြစ်ပြန်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖြေများရရှိရန် ၂၀၁၈ အထိစောင့်ဆိုင်းရမည်ဟုထင်ရသည်။
ဂူဂဲလ်အင်ဂျင်နီယာမှမှတ်ချက်ပြုသကဲ့သို့ဂူဂဲလ်အပ်ဒိတ်စနစ်ပျက်ကွက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းအရ အပြောင်းအလဲများကို Google Play တွင်ပြုလုပ်သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည် OTA ဗားရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည့်အလုပ်မလုပ်စေပါ။ အဲဒီမှာဖြစ်နိုင်တယ် မွမ်းမံချက်များမရရှိသေးသောအသုံးပြုသူများ ဒီအချိန်ကာလအတွင်း။ ထိုအတိုင်းဖြစ်ပါကပြproblemနာ၏အရင်းအမြစ်မှာဤအရာဖြစ်သည်။
အခုအချိန်မှာ ဤအမှားသည်မည်မျှကြာအောင်တက်သည်ကိုမသိရသေးပါ။ အဖြေတစ်ခုပေးရန်မည်မျှအချိန်ယူရမည်ကိုလည်းမသိရသေးပါ။ ၎င်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိမည်ဟုဆိုသော်လည်း၎င်းကိုမတွေ့ရသေးပေ။ ဒါကြောင့်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် android အသုံးပြုသူများအတွက်သိသာပြissueနာ.
သတင်းကောင်းသည်၎င်းသည်အလွန်လေးနက်သောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည် ထုတ်လုပ်သူအများစုသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် OTA update စနစ်ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ဂူးဂဲလ်အသုံးပြုသည့်အရာပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းမရှိပါ။ ဒါကြောင့်မအောင်မြင်တာကသင့်ကိုမထိခိုက်စေဘဲပုံမှန် update များကိုပုံမှန်ရရှိနိုင်သည်။ အတွက် Pixel နှင့် Nexus နှင့်အတူပိုင်ရှင်များ ဒီစိုးရိမ်ပူပန်စရာအကြောင်းမရှိပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိရိယာများမှာ bug ကိုပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ယခုအဘို့ ဂူဂဲလ်အပ်ဒိတ်စနစ်အပေါ်မူတည်သည့်အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းများအားလုံးသည်ဤပြbyနာကြောင့်ဖြစ်သည်. သင်ထိခိုက်ခံရသူများထဲမှတစ်ယောက်လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » updates အချို့ကိုစစ်ဆေးရန် Android ၏အချို့သောအချက်များ
Motorola က Star Wars Moto Mod ကိုထုတ်ဝေတော့မည်
LEAGOO 7Tc အသစ်ကိုဝယ်ရန်အကြောင်းပြချက် ၇ ချက်